OS X El Capitan တွင် Java 8 ထည့်သွင်းနည်း ငါက Mac ပါ
OS X El Capitan တွင် Java 8 ထည့်သွင်းနည်း
ပြီးခဲ့သည့်နွေရာသီကအက်ပဲလ်မှထုတ်ဝေသောသတင်းများသည် OS X El Capitan နှင့် Macs တွင်အထောက်အပံ့နှင့်အသုံးပြုမှုအဆုံးသတ်ခြင်းနှင့်ပက်သက်ပြီးထပ်မံပြောကြားခဲ့သည်။ အခြေခံအားဖြင့်တံခါးကိုလုံးဝပိတ်ထားခြင်းမရှိသော်လည်းဤ tool ကိုအသုံးပြုသောအသုံးပြုသူများအားအခြားနည်းလမ်းများရှာရန်သတိပေးခဲ့သည်။ အခု OS X El Capitan အသစ်ကိုရပြီ ပြီးတော့ Mac မှာ Java ကိုထည့်သွင်းရန်ရွေးချယ်စရာများနှင့် Java 8 ဗားရှင်းတွေတကယ်တော့ရှိတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် Apple ကမထောက်ပံ့ဘူး။
ထို့နောက်သင့်ကိုယ်သင်မေးပါလိမ့်မည်၊ အကယ်၍ Apple ကပံ့ပိုးမှုမပေးပါကကျွန်ုပ်ကိုကျွန်ုပ်တပ်ဆင်သလား၊ ကောင်းပြီ၊ ဒီမေးခွန်းရဲ့အဖြေကတော့ ၀ ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခု၊ application တစ်ခုသို့မဟုတ်သင်တီထွင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်သောကြောင့်သင်လိုအပ်သည်ဆိုလျှင်၎င်းကိုထည့်သွင်းပါမရရှိလျှင်, ပိုကောင်းဘူး။
ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသော်လည်းယနေ့ကျွန်ုပ်တို့တပ်ဆင်ခြင်းကိုတွေ့ရမည် Mac X တွင် OS X El Capitan ပါသော Java 8။ ဒီအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည် Terminal ကိုဖွင့်ပြီးဤလိုင်းကိုရိုက်နှိပ်သို့မဟုတ်ကူးယူရန်လိုအပ်သည်။java -version»အလိုအလျောက်ပေါ်လာသည့် ၀ င်းဒိုးတစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မည်။ပိုမိုသိရှိလိုပါက» Mac ၌ဤ Java ဗားရှင်းကိုမည်သည့်နေရာတွင် download နှင့် install လုပ်မည်နည်း။
download လုပ်ရန် Terminals မလိုအပ်ပဲ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်မှတိုက်ရိုက်ရယူနိုင်ပါသည် Oracle.com.
ဤထည့်သွင်းမှုသည် OS X El Capitan (SIP) ရှိ Integrity Protection System အားပိတ်ပစ်စေနိုင်သည် ပရိုဂရမ်မာများသို့မဟုတ်အဆင့်မြင့် Mac သုံးစွဲသူများအတွက်ကြိုတင်ကာကွယ်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် Mac ကို SIP အားပိတ်ထားရန်အနည်းဆုံးဗဟုသုတမရှိပဲ Mac ကိုပိတ်ထားရန်အကြံပြုပါသည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac ၏ SIP ကိုရပ်ဆိုင်းရန်လမ်းညွှန်စာအုပ်ငယ်တစ်ခုကိုထုတ်ဝေသွားပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac နှင့်ကာကွယ်မှုတွင်အကာအကွယ်တစ်ခုဖျက်သိမ်းခြင်းကြောင့်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုခြင်းမရှိပါ။ ဘယ်တော့မှမလွယ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ပရိုဂရမ်မာတွေကတော့အန္တရာယ်ကိုသေချာပေါက်နားလည်ထားပြီးအခုအချိန်မှာ Java ကိုသုံးဖို့အခြားရွေးချယ်စရာမရှိသေးဘူး။
သိပ်မကြာသေးခင်ကကျွန်မရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် Miguel Juncos ကကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုရှင်းပြတယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြခဲ့တယ် Java တွင်ပေါ်လာသော dialog box ကို disable လုပ်ပါ ဒီဟာဒီကိရိယာကို install လုပ်တဲ့အခါဖြစ်ပျက်နိုင်တယ်။ OS X El Capitan တွင် Java 8 ကိုထည့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ တင်းကြပ်စွာမလိုအပ်ပါလျှင်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac OS X ကို » OS X ကိုအယ်လ် Capitan » OS X El Capitan တွင် Java 8 ထည့်သွင်းနည်း
Apple က #Staingate ဖန်သားပြင်တွေကိုပြုပြင်လိမ့်မယ်
Tim Cook သည်တရုတ်စီးပွားရေးပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာပြသနာများကိုတိုက်ဖျက်ရန်အခြားစီးပွားရေးခေါင်းဆောင်များနှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်